Palmyra, ihe ijuanya nke ọzara Siria | Akụkọ Njem
Enric Gili | | General, Ihe ị ga-ahụ, Syria
Taa, aga m agwa gị banyere otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma m metụrụla, Palmyra. Njem njem nke enwere ike ịtụle dị ka nke osisi na nke ugbu a agaghị ekwe omume n'ihi mwakpo ndị na-eyi ọha egwu mgbe niile na mpaghara ahụ. Ọ bụ maka obodo ochie nke Palmyra, nnukwu mkpọmkpọ ebe ochie n'ọzara syrian.
E kwupụtara Palmyra dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa na 1980. Odude ke ufọt desert na-esote a oasis, ọ bụ otu n'ime ihe kacha mkpa dị mkpa bụ ihe ochie nke echekwara n'agbanyeghị mwakpo DAESH (Alakụba Alakụba) na ngosipụta nke ọdịbendị na oge niile bi ebe ahụ kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Fọdụ nchọpụta ihe ochie na-edepụta ntọala nke obodo ahụ n'ihe dị ka puku afọ nke abụọ BC, a hụkwara foduru site na Neolithic.
Tupu agha obodo na agha ISIS, Palmyra bụ otu n’ime ebe kachasị mma na Middle East na Syria.
1 Otu esi aga Palmyra?
2 Kedu ihe ị ga-eme na Palmyra?
Otu esi aga Palmyra?
N'ezie ajụjụ mbụ kwesịrị ịbụ "Ọ ga-ekwe omume ịga Palmyra ugbu a?" azịza ya ga-abụ Mba. Ọ kachasị mma ileta ya mgbe udo dị na mpaghara.
Bụlagodi, iji ruo Palmyra ọ ga-ekwe omume ịme ya n'okporo ụzọ, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala. Roadzọ na-ejikọ isi obodo Syria Damaskọs na Palmyra, dị ihe dịka 220Km na ihe dị ka awa 4 nke njem. Amaghị m ọnụ ahịa nke njem m na tagzi, ị ga-egwugharị oge niile.
N'agbanyeghị na m bụ ebe ndị njem kachasị mkpa na mba ahụ, m Ekwadoro m ịgagharị na ụlọ ọrụ na onye ndu, ebe dị anya dị ogologo ma ọtụtụ akwụkwọ ịma ọkwa nọ na Arabic.. Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ịnọ ebe ahụ.
Hotellọ nkwari akụ kachasị mma bụ Zenobia Cham Palace, naanị otu nke dị n'ihu mkpọmkpọ ebe ma wuru ya na 1930 site n'aka ụfọdụ ndị Europe, Countess Marga D'Andurain na onye ibe ya Pierre. Hotellọ nkwari akụ mara mma, ọnụahịa a na-anabata, ọgwụgwọ ziri ezi na akụkọ kwesịrị akwụkwọ akụkọ kacha mma. N'ebe ahụ ị nwere ike ịchọpụta ihe kpatara ya.
Kedu ihe ị ga-eme na Palmyra?
Mkpọmkpọ ebe dị n'akụkụ obodo nke oge a nwere otu aha ma ha nwere ndọtị nke ukwuu. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịga ụkwụ, mana enwere ụfọdụ mkpọmkpọ ebe (ụlọ elu olili ozu) nke dị n'akụkụ dị elu ma ọ bụ ebe dị anya chọrọ ụgbọ ala iji ruo ebe ahụ.
Palmyra apụtaghị otu ihe, bụ dum set. Emebere obodo ahụ dum site na narị afọ ndị ewuru ya, agha, mbuso agha na oge ọ dịrịla.
Ekwadoro m ka ị hapụ ụlọ nkwari akụ ahụ n'isi ụtụtụ ma bido ịgagharị na mkpọmkpọ ebe ochie. N'oge ọkọchị, okpomọkụ nwere ike iru 40ºC, weta mmiri na uwe dị mma iji jee ije. Gaa Leta obodo ochie niile n’ụtụtụ ma n’ehihie ma ọ bụ n’ehihie gaa Ndagwurugwu Tombs. Ọ bụrụ na ị nwere oge, m ga-agagharị na obodo Palmyra nke oge a.
Nke ahụ kwuru, anyị enweghị ike ịhapụ Palmyra na-enweghị ịhụ ihe ndị a:
Templelọ Bel (ma ọ bụ Bel): oge ​​gbanwere n'ime ụka nke edoro nye ofufe Bel, chi kachasị elu nke Mesopotamia, wee wuo na 32 AD Ọ bụ DAESH bibiri ya. Tupu mwakpo ahụ a na-ewere ya dịka ụlọ nsọ kacha mma echebere na Palmyra. Ugbu a, ha na-ewughachi ya.
Lọ nke Baalshamin, Nabu, Al-lat na Baal-Hamon, dịkwa n’ime obodo ahụ wee wuo n’agbata narị afọ mbụ na nke abụọ mgbe Kraịst nwụsịrị.
Isi osisi nke obodo: ọ bụ ogige mara mma nke karịrị 1km nke jere ozi dị ka okporo ụzọ Palmyra site na narị afọ nke abụọ AD ma ndị obodo, ndị ahịa na ndị ọzọ were ya. Ọ bụ n'ezie obodo a kacha mara amara na obodo a n'ụwa.
Roman nkiri: ọ bụ otu n'ime ụlọ ihe nkiri Rome kachasị mma n'ụwa. E wuru ya na narị afọ nke abụọ AD, mgbe Palmyra nọ n’okpuru ọchịchị nke Alaeze Ukwu Rom.
Ndagwurugwu nke ili: kilomita ole na ole site na obodo ochie na n'akụkụ ugwu ọtụtụ ụlọ elu ọchị na-ebili. Otu n'ime ha bụ ụlọ elu Elahbel, site na narị afọ nke XNUMX mgbe Kraịst nwụsịrị, na ọnọdụ nchekwa zuru oke. Nwere ike ịga leta ime ya wee hụ ọmarịcha ihe owuwu ụlọ na eserese.
Ozugbo udo laghachiri na Syria, M Ekwadoro m ka ị gaa Palmyra n'enweghị obi abụọ ọ bụla.
Enwere m ihe ndabara ọma ileta ya ọkara afọ tupu agha obodo amalite. N'oge ahụ mba ahụ yiri ka ọ na-emeghe ụwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọdịda anyanwụ amalitela ịnọ na Syria. O nyere m mmetụta na ndị mmadụ n'ozuzu ha nwere obi ụtọ na ọnọdụ dị na mba ahụ ma ọ masịrị ha na njem nleta malitere ileta ya. O doro anya na m hapụrụ mmetụta na-adabaghị na eziokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Palmyra, ihe ịtụnanya dị n’ọzara Siria